- Page 64 of 270 - NEWS & MEDIA
မန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာအရ အဆုတ်ရောဂါ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်လျှင်
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာအရ အဆုတ်ရောဂါ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်လျှင် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာအရ အဆုတ်ရောဂါ ၊အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်လျှင် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာအရ အဆုတ်ရောဂါဖြစ်ရင် (၁) သံပုရာရည်မကြာမကြာသောက်ပေးပါ။ (၂) သံပုရာသီးပေါင်းလည်းစားသုံးပေးပါ။ (၃) ဂျင်းရေ၊ဂျင်းသုပ်၊ဂျင်းပေါင်း စားသုံးပေးပါ။ (၄) နနွင်းပွင့်၊ နနွင်းမှုန့်၊ နနွင်းရွက်၊နနွင်းတက် စားသုံးပါ။ (၅) ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းသီး၊စားသုံးပါ။ (၆) မွန်းလွဲချိန်မှာ ရေမချိုးပါနှင့်။ နံနက်ချိန်ကိုသာ ရေချိုးပါ။ ရေမချိုးမီ ခြေနှစ်ဖက်စလုံးကို ရေလောင်းပေးပါ။ ပြီးမှရေချိုးပါ။ (၇) ရေနွေးကြမ်းသောက်ပါ။ ရှောက်ရွက်ကိုမီးနဲ့ကင်ပြီး လဘက်အဖြစ်သုံးပါ။ (၈) ဟင်းရည်ပူပူကိုသာ စားသုံးပေးပါ။ (၉) ကြက်သွန်နီ၊ဖြူ၊ထမင်းနဲ့အတူတူစားပေးပါ။ (၁၀) အိပ်ရေးမှန်မှန် အိပ်ပါ။ အိပ်ရေးမပျက်ပါစေနှင့်။ (၁၁) တစ်နေ့ကို …
ဆေးလိပ်သောက်တက်ရင် မဖြစ်မနေ ဒီအစားစာ (၅)မျိုးစားပေးပါ
ဆေးလိပ်သောက်တက်ရင် မဖြစ်မနေ ဒီအစားစာ (၅)မျိုးစားပေးပါ ဆေးလိပ်သောက်ရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မယ်၊ အထူးသဖြင့် အဆုတ်ကျန်းမာရေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်စေမယ်ဆိုတာကိုတော့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်လည်း သိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မကောင်းမှန်းသိလျက်နဲ့ကို မဖြတ်နိုင်ကြတာပါ။ မရှောင်နိုင်ရင်၊ မကာကွယ်နိုင်ရင်တော့ ကုသရပါမယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ စားရင်းသောက်ရင်းနဲ့ပဲ အဆုတ်ကို ပြန်လည်သန့်စင် ကုသလို့ ရပါတယ်။ အဆုတ်ကို သန့်စင်ပေးတဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးလှတဲ့ စူပါအစားအစာ ၅ မျိုးကို ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်နော်. . . ကြက်သွန် ကြက်သွန် ဆိုရာမှာ အဖြူ နှင့် အနီ နှစ်မျိုးစလုံးပါဝင်ပါတယ် ။ ကြက်သွန်က အဆုတ်ကို သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းအာနိသင်ရှိပါတယ် ။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း မှာ …
ဒီဆေးနည်းလေးကို သိထားရင်သေတဲ့အထိ လေမဖြတ်တော့ပါဘူး
ဒီဆေးနည်းလေးကို သိထားရင်သေတဲ့အထိ လေမဖြတ်တော့ပါဘူး လွန် ခဲ့ တဲ့ ၉ နှစ် လောက်က နက္ခတ ရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်း စာအုပ့် ကို လစဉ် ထွက်တာနဲ့ ဝယ်ပြီးဖတ်တယ်။ အဲထဲမှာက ဗဟုသုတ မှတ်သား ဖွယ်ရာတွေ အကိုးကားနဲ့ ပါလေ့ရှိတယ်။ မှတ်ထားမိတာလေး ပြန်လည်မျှဝေတာပါ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း သောက်သုံးဖူးတယ်။ အရသာ ကတော့ တော်တော် ခါးတယ်ဗျ အဲ့လိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မှီဝဲရတာလည်း ဝါသနာပါတယ်။ လိပ်စာ အတိကျတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ မုံရွာနယ် က ကျေးရွာ တစ်ရွာက တောကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ ဆေးနည်းလေးပါ။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ မုံရွာ-မန္တလေး ကားမောင်းသမား တယောက်ဟာ နေဒဓူဝ ကားမောင်းရတဲ့ …
ညဘက်ချစ်သူနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီး အိပ်စက်သွားခြင်းက ကျန်မာရေးကို ဆိုးဝါးစွာထိခိုက်စေနိုင်…
ညဘက်ချစ်သူနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီး အိပ်စက်သွားခြင်းက ကျန်မာရေးကို ဆိုးဝါးစွာထိခိုက်စေနိုင်… သင်တို့ဟာ ထစ်ကနဲရှိရန်ဖြစ်တတ်တဲ့ ချစ်သူရည်းစားစုံတွဲတွေ ဆိုရင် ပိုလို့သိထားသင့်ပါတယ်နော်… သိပ်ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူ စုံတွဲတိုင်း တစ်ဂျိန်းဂျိန်း ရန်ဖြစ်နေကြပါပဲ။ရန်မဖြစ်တဲ့အတွဲရယ်လို့ တော့မရှိပေမယ့် အခြေနေနဲ့အချိန်ခါကို ကြည့်ပြီး ရပ်တန့်သင့်တာကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။သဝန်တိုကြတယ် ၊ နားလည်မှုလွဲတယ် အမြင်စောင်းတယ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သဘောထားကွဲလွဲတယ် ဆိုတာမျိုးက တစ်လတစ်ခါလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်နေ့တိုင်းလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အချစ်စမ်းပြီးရန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ လည်းအချိန်ခါလေးထားသင့်ပါတယ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြဿနာရှင်းမယ် ဆိုတဲ့အချိန်ကို ဘယ်တော့မှ ညဘက်လို့မသတ်မှတ်ပါနဲ့။ ညမှအေးဆေးရှင်းမယ်ဆိုတာမျိုးကို ငြင်းပါ။ဘယ်လောက်ပဲရန်ဖြစ်ချင်နေပါစေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သဘောတူညီချက်ယူပြီး မနက်မှစိတ်အေးအေးနဲ့ ပြောကြဆိုကြပါ။ညအိပ်ခံနှီးပြဿာရှင်းတာ ရန်ဖြစ်တာမျိုး ဟာ နှစ်ဦးနှစ်ယောက်လုံးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါအများကြီး ထိခိုက်နိုင်စေတယ်ဆိုတာလုံးဝမမေ့ပါနဲ့။ဒီနေရာမှာ လူနှစ်မျိုးရှိတယ်။ တစ်မျိုးက ပြောချင်တာ ပြောပြီး စိတ်ပေါ့သွားရင် နေသာထိုင်သာရှိသွားတတ်တဲ့သူနဲ့ တစ်မျိုးကတော့ တစ်ခုခုဆိုရင် မေ့ပျောက်ဖို့ခက်ပြီး …
“ခုမှ ပိုအရေးကြီးနေပါတယ်။ ဖတ်ပါ။”
“ခုမှ ပိုအရေးကြီးနေပါတယ်။ ဖတ်ပါ။” မြန်မာ ဖြစ်စဉ်လေး က မလေးရှားပုံစံလေးနဲ့တူနေတာနော်။ ပျော်မနေကြနဲ့ဦး။ကိုဗစ်ကို နိုင်ပါပြီ မထင်နဲ့ဦး။တက်မထောင်ကြပါနဲ့။ သတိ။ မလေး Data ကို တစ်ပုံချင်းလေ့လာပါ။ လူတိုင်းဟာအသံတိတ်ပိုးရှိနေသူဖြစ်နိုင်ပါတယ်”Malaysia သင်ခန်းစာယူရန်” Credit: ဆန်နီ #MMMNaing တစ်လ အကြာထိ ကူးစက်သူ ၂၂ ယောက်၊(၁၀) ရက်အတွင်း အပြောင်းအလဲလုံးဝမရှိပဲ(၂၂) ယောက် မှာဂဏန်းငြိမ်နေရာက အခု မြန်မာနိုင်ငံလိုပေါ့နော် ဒုတိယလမှာအနည်းဆုံး (၁၀၀) ကျော်ကနေ (၂၈၀)အထိနေ့စဉ် ကူးစက်မှု တိုးလာခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံသင်ခန်းစာရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူအားလုံးသတိနဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ ဆက်နေကြပါ။ မပေါ့ လျော့ကြပဲ ဇွဲနဲ့ဆက်နေကြပါ။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေသင်ခန်းစာယူပါ။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ လာအို နိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံပဲအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေထဲ (၂ …
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ နှာခေါင်းစည်း (mask) ပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသက်ရှင်နိုင်မလဲ?
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ နှာခေါင်းစည်း (mask) ပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသက်ရှင်နိုင်မလဲ? သုံးပြီးသား mask တွေကို လမ်းပေါ်မှာ စည်းကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်ထားတာ မြင်ရကတည်းက ဒီ post ကို ရေးချင်နေတာပါ။ University of Hong Kong မှာ သုသေသနပြုချက်အရ COVID-19 ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ SERS-CoV-2 virus ပိုးဟာ mask တွေအပေါ်မှာ7ရက်အထိ အသက်ရှင်နိုင်ပါသတဲ့။ အဲ့ဒါကြောင့် သုံးပြီးသား mask တွေကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ကြပါ။ mask ဟာ ပိုးရန်က တိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ကာကွယ်ပေးပေမယ့် စနစ်တကျ မစွန့်ပစ်ရင် ပိုးဖြန့်ပေးမယ့်အရာ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ လမ်းပေါ်ကနေ …
” သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့သူ (သို့) မယားငယ်တွေ ခံစားရမယ့် ပူလောင်ခြင်းဝဋ် (၅) မျိုး “ …
” သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့သူ (သို့) မယားငယ်တွေ ခံစားရမယ့် ပူလောင်ခြင်းဝဋ် (၅) မျိုး “ … လောကမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ အယုတ်ညံ့ ဆုံးလုပ်ရပ်တွေထဲမှာသူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကိုဖြိုခွဲတာ လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတွေက ယာယီတော့ ပျော်ရွှင်ရမယ်.. ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး သူတစ်ပါးမိသားစုကို ဖြိုခွဲတဲ့သူတွေ၊ ဖောက်ပြန်တဲ့သူ တွေခံစားရမယ့် အရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးလည်း သတိထားဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ… (၁) ပူလောင်ခြင်း … သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲတဲ့သူတွေနဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ သူတွေ အမြဲတမ်းခံစားနေရမယ့် အရာကတော့ ပူလောင် ခြင်းပါပဲ သူတို့ရင်ထဲမှာ နောင်တရသလိုလို၊ ကျေနပ်သလိုလို …
မီးပူဖင်မှာ ဂျီးတွေ တက်နေလား မပူပါနဲ့ ပါရာစီတမော့ (၂) ပြားရှိရင် အလွယ်တကူ ပျောက်အောင်လုပ်နည်း… မီးပူဖင်မှာ ဂျီးတွေ တက်နေလား မပူပါနဲ့ ပါရာစီတမော့ (၂) ပြားရှိရင် လွယ်ကူပါတယ်… မီး ပူ ဖင် မှာ ဂျီး တွေ တက် နေ လား မ ပူ ပါ နဲ့… ပါ ရာ စီ တ မော့ (၂) ပြား ရှိ ရင် လွယ်ကူပါ တယ် ဗျ… လက် တွေ့ လုပ် ကြည့် လိုက် ပါ နော် …
သန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်းဘဝက တက်မှာမဟုတ်ဘူး ..လို့ ချစ်သူရဲ့အနှိမ်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ သူဌေးကြီး
သန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်းဘဝက တက်မှာမဟုတ်ဘူး ..လို့ ချစ်သူရဲ့အနှိမ်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့ သူဌေးကြီး စင်္ကာပူက နာမည်ကျော် သူဌေးတွေထဲမှာ Vernon Kwek အမည်ရ အသက်(၄၈)နှစ်အရွယ် သူဌေးကြီးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သူဟာ Primech Services & Engineering ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ရာထူးရယူထားသူဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်း(၃၀၀၀)ကျော်ကို အုပ်ချုပ်နေရသူပါ။ Vernon ဟာ ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုက ဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပြီး၊ မိဘအမွေကြောင့် ချမ်းသာလာတဲ့ တစ်ခြားသူဌေးတွေနဲ့ မတူညီပါဘူး။ သူဟာဘဝမှာ ကျရှုံးမှုတွေနဲ့ နလန်မထူနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး၊ ဒေဝါလီခံ လူမွဲစာရင်း သွင်း ခံခဲ့ရဖူးသလို၊ ကျောင်းကနေ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရဖူးသူပါ။ သူဟာ ရုံးသန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာ၊ အလုပ်မဖြစ်လို့ ချစ်သူကတောင် …
ပါရာစီတမောနှင့် ကော်ဖီ တွဲမသောက်သင့်သည့် အကြောင်းအရင်း
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ပါရာစီတမောနှင့် ကော်ဖီ တွဲမသောက်သင့်သည့် အကြောင်းအရင်း အချိန်ခဏလေးပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါနော် ။ ပျင်းလို့ ဆိုပြီးလည်း ကျော်မသွားကြပါနဲ့ ။ သိပြီးသားသူတွေကလည်း မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါနော်။ အခုပြောပြပေးမဲ့ အကြောင်းရာကတော့ ပါရာစီတမော “Paracetamol” အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပါရာစီတမောကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားမှု မရှိပဲ အလွယ်တကူ ဝယ်သောက်နေသူများ များပြားလာပါပြီ ။ နေမကောင်းလို့ သောက်တယ် ၊ ခေါင်းမူးလို့ သောက်တယ် ၊ ညောင်းညာကိုက်ခဲလို့ သောက်တယ် ၊ ဗိုက်အောင့်လို သောက်ကြတယ် ။ အကြောင်း အမျိူးမျိူးနဲ့ သောက်သုံး နေတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ …
Previous 1 … 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 … 270 Next
This Month : 33746
This Year : 204972
Total Users : 500105
Total views : 2069451